Madaxweyne Muuse Biixi oo gaaray Nairobi (SAWIRRO) – AfmoNews
Madaxweyne Muuse Biixi oo gaaray Nairobi (SAWIRRO)
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa galabta gaaray Magaalada Nairobi ee Xarunta Wadanka Kenya.
Madaxweynaha Somaliland ayaa lagu wadaa in berrito uu magaaladaasi kula kulmo Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta.
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa lagu yiri “Tani waa booqashadii labaad ee hoggaamiye reer Somaliland ah uu ku yimaado Kenya, ka dib booqasho lamid ah tii Madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin uu ku yimid 2006-dii.”
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri “Somaliland waa saaxiib muhiim u ah Gobolka Geeska Afrika ee la dagaalanka argagixisada, gaar ahaan Al Shabaab.”
Qoraalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa lagu yiri “Kenya xiriir diblomaasiyadeed lama lahan Somaliland, balse waxay aqoonsan tahay xasiloonida siyaasadeed iyo dhaqaale ee gobolka, waxayna dooneysaa inay xoojiso oo ay ballaariso ganacsiga badeecadaha, adeegyada iyo sidoo kale maalgashiga, oo saldhig u ah iskaashiga horumarineed ee muddada fog ee gobolka.”
Tani waxay ku soo aadaysaa, xilli labadii toddobaad ee ugu dambeysay uu aad u xumaaday xiriirkii diblomaasiyadeed ee Somaliya iyo Kenya.